Ahoana ny fomba fampiraisana ireo fitaovana Android Wear roa amin'ny fotoana iray | Androidsis
Ny iray amin'ireo fiasa tsy nananan'ny Android Wear dia ny mety afaka mampifandray fitaovana Android Wear roa amin'ny fotoana iray amin'ny terminal iray ihany raha tsy misy ny filàna ilaina dia manala ny iray amin'izy ireo mba hahatratra ny fampifanarahana na hampifandray ilay iray hafa. Tena fanelingelenana ho an'ny mpampiasa rehetra izay manana mihoatra ny iray amin'ireo fitaovana Wareables toy ny smartwatches Android Wear isan-karazany ireo.
Ao amin'io kinova vaovao vaovao an'ny fampiharana Android Wear, iza no azonao atao misintona mivantana amin'ny endrika apk amin'ity rohy ity ihany, fanatsarana maro no nampiharina, na dia ny tena manamarika azy rehetra aza dia ny fiasa vaovao nampiana mba hahafahana mampifandray fitaovana Android Wear roa amin'ny fotoana iray amin'ny Android Smartphone na Tablet iray ihany. Eto izahay dia manazava tsikelikely amin'ny horonan-tsary, ny fomba marina hampifandraisana fitaovana Android Wear roa amin'ny Smartphone iray ihany nefa tsy mila mamafa ny iray amin'izy ireo vao mahazo.
Ahoana ny fomba fampifandraisana fitaovana Android Wear roa miaraka
Ahoana no ahitanao ny horonan-tsary mifamatotra eo ambonin'ireto tsipika ireto, mampifandray fitaovana Android Wear roa miaraka Ao amin'ilay Smartphone Android na Tablet iray ihany dia tsotra dia tsotra izy ireo ary tsindrio fotsiny eo amin'ny ilany havia ambony amin'ny rindrambaiko Android Wear nohavaozina ho an'ny kinova farany, eo amin'ny toerana ampahafantarana antsika ny anaran'ny fitaovana Android Wear izay ampifandraisintsika.
Ao amin'ny varavarankely mitete-midina izay miseho, dia aseho safidy vaovao izay mamela antsika ampifanaraho amin'ny fitaovana Wareable vaovao amin'ny fipihana fotsiny eo hoe: "Vicular miaraka amina famantaranandro hafa"
Raha vao mifandray, araka ny hitanao amin'ny pikantsary etsy ambony, afaka manao izany izahay mifanakalo eo anelanelan'ny fitaovana mifandray amin'ny fanindriana fotsiny ny anaran'ny fitaovana tiantsika hampifandraisana. Mora sy tsotra tokoa.
Tsy misy isalasalana fa misy fampiasa vaovao afaka mampifandray fitaovana Android Wear roa miaraka fa efa nila nampiharina izy ireo ary ny tompon'ny rindrambaiko Android Wear marobe dia azo antoka fa mankasitraka betsaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ahoana ny fomba fampifanarahana fitaovana Android Wear roa miaraka
Juan Ibarra dia hoy izy:
Salama. Manana iPhone aho. Misy fanavaozana an'ity telefaona ity ve? Aiza no ahazoako azy? Hatreto tsy vitanao. Misaotra sahady
Valiny tamin'i Juan Ibarra
Lalao mampiankin-doha amin'ny Android: androany, Space Liner
Mety io ve no omanin'i Google ho antsika miaraka amin'ny Android 6.0 Muffin vaovao?